XULASHADA NOOCYADA UGU CAANSAN EE LUMBAGO (CAWSKA-HURDO) - CAWSKA HURDADA
Ugu Weyn Ee Cawska hurdada
Waxaan helnaa nuucyada kala duwan ee lumbago (hurdada hurdo)
Dabeecadeena waxaa jira warshad xiiso leh oo cajiib ah sida xarig isdhaaf ah. Marka barafku uusan weli soo dhicin, waxaad arki kartaa ubaxyo aan caadi ahayn-lilac oo isku mid ah tulooyinka caadiga ah ee dusha sare. Caws iyo caleenta mucjisadan ayaa lagu daboolay fax, iyo qaybta dhexe ee jaalaha ah ayaa soo jiidata isha. Sababtoo ah muuqaalka hore, dadka, ubaxyada waxaa lagu magacaabaa "barafka".
Lumbago, ama cawska-cawska, waxay ku badan tahay Waqooyiga Xeebta waxayna leedahay qiyaastii 40 nooc, qaar ka mid ah ayaa ku qoran Buugga Cas.
Ma taqaanaa? Dadku waxay aaminsan yihiin in sharku uu ka cabsanayo cawska hurdada oo ka baxa. Waxay ka caawisaa, sida ay aaminsan yihiin caanka ah, ka soo waxyeelada iyo indhaha sharka, iyo haddii aad cawska ku qaadato, waxaad naftaada ka ilaalin kartaa nooc kasta oo ah shucuur iyo sharaf xun.
Magaca Laatiin ee qolkan waa Rulsatilla Alpina. Waxay koraa ilaa 20 cm ee dhererka, blooms laga bilaabo May ilaa August oo leh caddaan, cream ama ubax jilicsan. Waxay ka duwan tahay inta kale ee lumbago ee symmetry hoose ee inflorescence iyo noocyo kala duwan oo tufaax ah. Waxaa jira noocyo kala duwan oo ka mid ah meelaha Alpine, kuwaas oo laga helo kaliya suunka Alpine ee ku yaala Bartamaha iyo Bariga Yurub, laakiin meelaha ugu sarreeya ee Koonfurta iyo Bartamaha Yurub ayaa loo tixgeliyaa inay yihiin beelahooda.
Waa muhiim! Cawska hurdada ma aha habka ugu wanaagsan ee loo dulqaadan karo isu tallaalidda, markaa waa inaad u fadhiisataa sida ugu dhakhsaha badan marka caleemaha kowaad soo baxaan. Maaddaama dhirtaas ay ka mid yihiin guga hore, waa in lagu beeraa kooxo gooni u dhow jidka. Saaxiibo fiican - Crocus iyo primroses.
Rulsatilla Vernalis - sidaas darteed luuqada waxaa lagu magacaabaa nooca cirifka. Xuduuda Ruushka, ee duurka, waxaa laga helaa oo keliya Karelian Isthmus (Gobolka Leningrad), koonfurta galbeed ee Karelia iyo xeebta waqooyi galbeed ee Lake Ladoga.
Gaar ahaan waxaa loo qaybiyey waqooyiga Primorsk-Michurinskoe-Otradnoe. Koonfurta waxaa laga heli karaa oo kaliya meelaha qaarkood (Orekhovo, Lembolovo, Kannelyarvi). Ka baxsan Ruushka, qolka guga ee xaaladaha dabiiciga ah waxay ku koraan buuraha Bartamaha Yurub (Alps, Pyrenees), bariga Bartamaha Yurub, waqooyiga Jylland, koonfur-galbeedka Finland, qaybta koonfureed ee jasiiradda Scandinavian.
Qaybta guga - warshad ilaa 30 cm oo dheer, oo leh wax yar oo afuufo. Leaves - trifoliate, muuqan kaddib markii ubax. Ubax keli ah, ilaa 4 cm dhexroor, gudaha - caddaan, dusha sare - guduud. Kajirinta qaababka dawanno ee tobanka sano ee labaad ee Maajo. Muddada ubax - 20-25 maalmood.
Under xaaladaha dabiiciga ah, ubaxa this jecel yahay buurta dabiiciga ah cawska iyo keynta geed. Fikrad ahaan ma bixiso beerashada, waxay jeceshahay ciidda acidic leh ciid iyo gogol xarrago leh. Haddii ay jiraan geedo qulqulaya dhulka dhulka, noocan oo kale ah ubax waa lagu talinayaa in lagu beeray geedo dhif ah.
Geedka waxaa si fudud loo faafiyaa abuurka oo wuxuu bilaabaa inuu ku barbareeyo sannadka lixaad ama siddeedaad ee nolosha. Waxay leedahay heer ku filan oo ah jilicsanaanta jiilaalka iyo si degan u wareejinta heerkulka -32 ºC.
Noocyada noocan oo kale ah (Latin - Pulsatilla Montana), iyo sidoo kale Alpine, ayaa iska leh dhirta alpine. Muddada ubaxu waa 30 maalmood, bilowga ubaxu wuxuu ku dhacaa qaybta hore ee May. Ciriiri ciriiri ah oo jilicsan oo ah midab madow oo casaan iyo caleemo qafiif ah oo caleemo la go'ay. Kama koraan 20cm.
Marka loo eego xaaladaha dabiiciga ah, waxay ku koraan Bartamaha iyo Bariga Yurub, ee ku yaalla jasiiradaha.
Ma taqaanaa? Lumbago qurxinta beerta leh tayadooda cajiib ah. - isbeddel. Waxay si sahlan u dhexgalaan, iyo shaybaarka cusub ayaa laga arki karaa goobta.
Sunny Pulsatilla Aurea had iyo jeer waxay u muuqataa mid ka weyn inta uu le'eg yahay. Koraaya ilaa 35 cm, waxaa lagu kala saaraa iftiin, qalafsan, caleemo lakulmay iyo petioles dheer. Si kastaba ha noqotee, cagaarka dhalaalaya oo kaliya ayaa asalkoodu yahay ubaxyada lix-sentimitir ee quruxda dahabka ah. Qaybaha dahabiga ah ee loo yaqaan 'Golden Chamber' bishii Juunyo, oo ah hirgelinta nacas kulul. Isla mar ahaantaana, ubaxyada iyo cagaarka labaduba waa la muujiyaa isla wakhtigaas. Dahabiga lumbago wuxuu ku guuleystaa quruxdiisa, gaar ahaan meelahaas oo ay ku koraan xaaladaha dabiiciga ah (Cawaduus).
Waa muhiim! Nooc kasta oo hurdo-cawsku waa sun, sidaas daraadeed waa inaad ka taxadartaa inaadan ka helin casiirkiisa maqaarka. Waxay keeni kartaa cuncun iyo gubasho, laakiin qaabka la qalajiyey qolka iskudhafku wuxuu lumiyaa guryaha suntan.
Magaca Laatiinka ee qolka ugu horreeya waa Pulsatilla Campanella. Inkasta oo uu u egyahay oo u eg yahay marin caadi ah, laakiin ubaxyadiisu waa mid aad u sarreeya, yar yar oo gaabis ah oo fiiriya. Gaaritaanka kaliya 2.5 cm ee dhexroorka, waxay u muuqdaan kuwo waxtarka badan leh sababtoo ah qaabkoodu jilicsan yahay oo jilicsan, midab madow. Blooming qolka ubaxyada ee bisha Abriil iyo Maajo. Caleemaha si qoto dheer ayaa loo kala saara oo aad u dhalaalaya.
Marka la eego xaaladaha dabiiciga ah, qaybta sare ee suunka kaynta ayaa sida ugu badan ee subalpine iyo alpine yareh.
Ilmahan soo jiidashada leh ayaa leh magac ka duwan - qolka Haller (Laatiin - Pulsatilla Halleri). Duurjoogta, waxay ku nooshahay Crimean oo ku taal xayawaan aan duugnayn oo dusha sare ah, duufaan dhagax ah, cawska iyo Yurubta dhexe. Marka riyadan ay caleemaha caleemaha ku dillaacdo, waa wax aan macquul ahayn in la jeexo muuqaal. Dabayaaqadii Abriil - horraantii May, qolka Crimean waxaa lagu muujiyay shaggy, ubaxyo guduud leh oo leh qalbi jilicsan oo caleemo hurdi ah iyo caleemo dheer oo gaadhaya qorraxda, caleemo dhalaalaya.
Noocyada noocaan ah, oo magaciisa la yidhaahdo Pulsatilla Pratensis, ayaa lagu gartaa ubax qoyan oo hoos u dhaadheer leh oo ku dul wareegsan oo ku dul wareegaya ilaa 5 cm dhexroor. kaliya taabashada. Wuxuu billaabayaa in la barbardhigo dabayaaqada Abriil oo wuxuu ku farxaa isha ilaa 20-30 maalmood. Nooca ugu caansan ee Lugaboy cirifka Nigricans aad ku qurxin doonaa leh midab madow-guduud ah.
Cawska qorraxda, oo dhererkeedu gaaro 30 cm, waxaa si dabiici ah u helay geedo geedo ah iyo meelo qallalan ee aagga kaynta.
Waa muhiim! Dhammaan reerka barafka ah ee burcadka, Lugovoy dhabarka ayaa ah sunta ugu caansan. Casiirka maqaarka ee maqaarku wuxuu u keenaa inuu boogo, iyo cabitaanku waa mid aad u baaxad leh oo ka yimaada mareenka caloosha iyo mindhicirka, kelyaha, iyo xitaa u neefsado neefsashada.
Caleemaha noocyadaasi waxay u koraan 20 cm waxayna ku dhajiyeen ubaxyo isku mid ah oo leh qaab-dawarsan oo leh qaab qurux badan oo qurux badan oo ubax ah si ay u jaraan caleemo. Lumbago Ordinary - qaabka ugu kala duwan, sharaxaad ka mid ah foomamka kuwaas oo qaadan kara bogag dhowr ah. Sidaa darteed, hadda waxaan u dabaaldegi doonaa oo kaliya noocyada ugu wanaagsan:
Amoena - waxaa lagu gartaa ubaxyo guduudan, guduud ah oo casaan badan iyo ubax hore;
Atrosanguinea - waxay ku kala duwan yihiin ubaxyo casaan cas iyo caleenta khafiif ah;
Geesin - qurxin weyn leh (ilaa 8 cm dhexroor) ubaxyo;
Mrs van der Elst - kala duwan ubaxyo casaan leh;
Papageno - hoosaadyo leh ubaxyo cad oo waaweyn iyo tufaax kala duwan;
Papageno Black - waxaa lagu gartaa midabada midabka lilac dhalaalaya;
Rote Glocke waa noocyo kala duwan oo laleh.
Noocyadaasi waxay ku jirtaa bisha Abriil, waxay leedahay heer sarreeya oo barafooban (waxay u adkeysan kartaa ilaa -23 ºC), waxaana laga helaa dabiiciga duurka ee Western Europe (marka laga reebo dhinaca koonfureed).
Lumbar la furay (lat - Pulsatilla Patens) - tartanka ugu wayn ee Orb. Aad u kala duwan (7-50 cm) iyo midabka ubaxa. Caleemaha ayaa isla markiiba soo muuqanaya kaddib marka ay ubax yihiin waxayna yihiin finger-qaabeeya. Ubax waa caddaan, lilac dhalaalaya ama midab buluug ah, oo gebi ahaanba u dhigma magaca - dhexaadkeeda waxay gaartaa 8cm. Bilowga hore, qaabka caadiga ah ee muraayadu isbeddelaan waxay u egtahay calyx ah xiddig furan. Tan iyo ubaxu u muuqdo, si fudud ayaad u arki kartaa dhamaan faahfaahinteeda.
Waxuu ku jiraa Abriil iyo May, isaga oo sii deynaya ilaa 50 ubax baadiyaha.
Duurjoogta, qolka cirifka la furay wuxuu leeyahay koboc aad u ballaadhan: dhulka Yurub ee Ruushka, Galbeedka Siberia, Bartamaha iyo Galbeedka Yurub. Waxaa laga helaa meelo qoyan oo qallalan oo ku yaal xayawaanka saboolka ah iyo kuwa hodanka ah, si kastaba ha ahaatee, waxay u nugul tahay iftiinka.
Wuxuu taranka ku abuuraa seeding-ka, laakiin sidoo kale waa la ogyahay kiisaska dhirta.
Rugta shakiga (Pulsatilla Ambigua), meel kasta oo ay dhacdo, waxaa lagu kala saaraa midab buluug ah, oo leh midabka ultramarine. Nacaslaha jilbaha leh ayaa leh cabbir yar (2 cm oo kaliya), laakiin isla mar ahaantaana waxay u muuqdaan kuwo qurux badan. Waxay ku jiri doonaan burooyinkeeda, iyo, si tartiib ah u kaca, furi. Waxay ku baraarugaa dabayaaqadii Abriil ee aagga kaynta iyo dabayaaqadii May-horraantii Juunyo ee jiilaalka. Caleemaha waa la kala firdhiyey, samee rosette ah 30 cm dhexroor, xoojinta peduncles. Goobaha dabiiciga ah ee dabiiciga ah - Siberia iyo Mongolia.
Ma taqaanaa? Dhirta xooluhu waxay isticmaalaan kalluunka Shaki la'aan Shaxda guga hore oo si dhakhso ah u soo celiya xoogga daciifsan ee xayawaanka guryaha.
Markaad aragto ugu yaraan hal mar dhabta inta lagu jiro xilliga ubaxyada, weligaa waad ku riyaaqi doontaa quruxdooda, sababtoo ah adduunku way adagtahay in la helo aragti badan oo taabashada dabiiciga ah. Nasiib darro, noocyada kala duwan ee hurdo-huruudda waxay ku qoran yihiin Buugga Cas iyo waxaa laga helaa maalin ka yar.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Cawska hurdada 2019